Oppo Unveiled the World’s First Rollable Smartphone Tech News Nepal
बुधबार, मंसिर ३, २०७७ १०:२०
ओप्पोले ल्यायो बेर्न मिल्ने अनौठो फोन, यसरी सानो-ठूलो बनाउन सकिन्छ स्क्रिन
काठमाडौं । स्मार्टफोन कम्पनीहरु लगातार नव प्रवर्तनको क्षेत्रमा एकपछि अर्को परीक्षण गरिरहेका छन् । गएको वर्षको सुरुवातबाटै बजारमा फोल्डेबल डिस्प्ले भएका स्मार्टफोन आउन थालिसकेका छन् र धेरै कम्पनीहरु यसमा प्रतिस्पर्धामा जुटिसकेका छन् ।
यस्तैमा ओप्पोले एक कदम अगाडि सार्दै रोलेबल अर्थात बेर्नमिल्ने डिस्प्ले भएको कन्सेप्ट फोन ओप्पो एक्स २०२१ ल्याएको छ । यो रोलेबल डिस्प्ले भएको विश्वकै पहिलो फोन हो र एउटा टचबाट नै यसको डिस्प्लेको आकार बदल्न सकिन्छ ।
चिनियाँ प्रविधि कम्पनी इन्नो डे २०२० कार्यक्रमको दौरान ओप्पो एक्स २०२१ सार्वजनिक भएको हो । यसमा युनिक एक्सटेन्ड गर्न सकिने स्क्रिन दिइएको छ ।
यसको अर्थ यो फोनको डिस्प्लेलाई सानो वा ठूलो पार्न सकिन्छ । कम्पनीको रोलेबल कन्सेप्ट प्रविधियुक्त यो डिभाइसको डिस्प्लेको आकार ६.७ इन्चबाट बढाएर ७.४ इञ्चसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।
डिस्प्ले बीच भागबाट नमोडिने भएकाले कम्पनीले यो फोन टिकाउ समेत हुने बताएको छ । साथै फोल्डेबल फोनमा जस्तो डिस्प्लेमा कुनै क्रिज समेत हुँदैन ।
ओप्पो एक्स २०२१ मा कम्पनीले ओएलईडी प्यानल राखेको छ । यसलाई ६.८ एमएम रोल मिटरको सहयोगमा सानो वा ठूलो पार्न सकिन्छ ।
कम्पनीले यो कन्सेप्टका लागि कुल १२२ पेटेन्ट दर्ता गरेको थियो । जसमध्ये १२ वटाको प्रयोग केवल स्क्रोल संयन्त्र बनाउनका लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ ।
ओप्पोले यो डिभाइसको बलियोपनमा निकै ध्यान दिएको छ । रोलेबल डिस्प्लेको पछाडि सोलिड सपोर्ट स्ट्रक्चर दिइएको छ ।
What do you think about the OPPO X 2021 rollable concept handset? #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/fkPpoj55k7
— OPPO Mobile Nigeria (@oppomobileng) November 17, 2020
कम्पनीले एक विशेष टु ईन वान डिजाइन गरेको छ, जसले डिस्प्लेलाई सानो वा ठूलो पार्न सपोर्ट गर्दछ । ओप्पोका प्रमुख फाइभजी वैज्ञानिक हेनरी टैंङले फोल्डेबल प्रविधिको तुलनामा रोलेबल डिस्प्ले बढी सहज रुपमा आत्मसाथ गर्न सकिने बताएका छन् ।
किन भने विभिन्न आवश्यकता अनुसार डिस्प्लेको आकार सहजै बदल्न सकिन्छ । कम्पनीले अतिरिक्त सुरक्षाका लागि कस्टम मेड लेमिनेसन समेत डिस्प्लेमा थप गरेको छ ।
यसले र्‍याप ट्र्याक ०.१ एमएम लेमिनेट रोल हुँदाको समयमा डिस्प्लेलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ । यद्यपी यो कन्सेप्ट फोनको विस्तृत विवरण तथा स्पेसिफिकेसन भने उपलब्ध गराइएको छैन ।
स्न्यापड्रागन ८७० प्रोसेसर भएको स्मार्टफोन ल्याउँदै ओप्पो
काठमाडौं । चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता ओप्पोले एक हाई-इन्ड स्मार्टफोन लञ्च गर्ने तयारी गरेको छ ।
ओप्पोले नेपालमा सुरु गर्‍यो नछोएरै कल उठाउन मिल्ने फोनको बिक्री, कति छ मुल्य ?
काठमाडौं । ओप्पोले नेपालमा बिहीबारदेखि एफ सेभेन्टिन प्रोको बिक्री सुरु गरेको छ । कम्पनीले देशभर
हेल्थ ट्रयाकिङ सहितको ओप्पो वाच नेपालमा, यस्तो छ विशेषता र मूल्य
काठमाडौं । ओप्पोले नेपालमा आफ्ना आईओटी उपकरणको श्रेणीमा नयाँ उत्पादन थप गरेको छ । जसअन्तर्गत
काठमाडौं । चिनियाँ ब्राण्ड ओप्पोले नयाँ स्मार्टफोन ओप्पो एफ१७ प्रो नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेका छ